यसकारण ऐश्वर्याले आफ्नै पति अभिषेकसँग फिल्म खेल्न गरिन् अस्विकार ! -
बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चन र अभिनेत्री ऐश्वर्य राय अन्तिम पटक सन् २०१० सालमा फिल्म ‘रावन’ मा एक साथ देखिएका थियो। यस चलचित्रको निर्माण मनिरत्नमद्वारा गरिएको थियो, तर यस पछि धेरै निर्माताहरुले यी दुवै कलाकारलाई एकै फिल्ममा एकसाथ ल्याउन कोसिस गरेका थिए। जब यो खबर आयो कि अब अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्य राय एक साथ फिल्ममा फिल्म खेल्ने छन् र उनीहरुलाई त्यो फिल्मको स्क्रिप्ट पनि मन पराएका थिए। तर समस्या आयो कि फिल्म निर्माण केही समयका लागि अगाडी सारियो।
वेबसाइट डीएनएको एक रिपोर्ट अनुसार सैलेश आर. सिंहले अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्य रायसँग फिल्मका लागि छलफल गरेका थिए। यस फिल्ममा खेल्नका लागि अभिषेक बच्चन तयार भएका छन् भने तर ऐश्वर्य भने सैलेशसँग फिल्मको स्क्रिप्ट बारे कुरा गरिरहेकी छिन। यस फिल्मबाट अभिषेक बच्चन र ऐश्वर्य रायलाई लगभग ८ वर्ष पछि पर्दामा एक साथ देख्न सकिन्छ। तर यस फिल्मको काम केही समयका लागि रोकिएको छ। यद्यपि, यस परियोजनाको काम निश्चित रूपमा गरिनेछ।
रियल लाइफ कपल अभिषेक र ऐश्वर्य फिल्ममा पनि पति-पत्नीको भूमिकामा उपस्थित हुनेछन र उनीहरु दुवै जना यस फिल्ममा पुलिसको रुपमा देख्न सकिन्छ। फिल्मको स्क्रिप्ट वास्तविक जीवन कथामा आधारित छ, जसमा विवाहित दम्पति राजनीतिक समस्यामा फस्छन। स्रोतका अनुसार ऐश्वर्यले आफ्नो कामको बारेमा विकल्पहरु बनाउन समय लिने गर्दछ। उनी फिल्मको स्क्रिप्टमा केही परिवर्तनहरु चाहन्छिन र अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन। यसै बीचमा उनले दोस्रो चलचित्र ‘रात और दिन’ मा साइन गरेकी छिन। अभिषेकले पनि केही नयाँ प्रोजेक्ट्समा काम सुरु गरेका छन्। यद्यपि , अब दर्शकहरुले दुवै जनालाई फिल्ममा एकसाथ देख्न लागि लामो समय पर्खनु पर्छ।
Previous आफ्नै प्रेमिकालाई हत्या गरी कालीगण्डकी नदीमा फाल्ने युवक पक्राउ
Next के साच्चै तक्मे बूढा अर्थात् विल्सन बिक्रम राई बाधिएकै हुन् त वैवाहिक बन्धनमा ?